Isu kwete chete kuva oga mafekitari edu asi vanewo migove mune dzimwe mabhizimisi.
Hongu, kana mharidzo inowanika unganidza
Unogona kuronga mabhuku acho?
Chokwadi, tine zvachose mitoro forwarder ndiani angawana yakanaka mutengo kubva muchikepe kambani akawanda uye kupa basa nenyanzvi.
Zvinonzi inobva hurongwa, kazhinji 15 - 20 Mazuva mushure mekugamuchira mubhangi kana L / C pa kuona.
Une yepamusoro kudzora?
Hongu, takawana BV , SGS authentication.
Ndezvipi muripo yenyu mashoko?
100% hazvishanduki L / C pa kuona. Kana T / T , 30% mberi, uye mwero pamusoro kopi B / L mukati memazuva 3-5.